Mudug: Wariye ajnabi ah oo afduub laga sii daayey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mudug: Wariye ajnabi ah oo afduub laga sii daayey
A warsame 24 September 2014 24 September 2014
Mareeg.com: Wariye lagu magaaabo Micheal Scott Moore oo heysta dhalashooyinka dalalka Mareykanka iyo Jarmalka ayaa shalay xoriyaddiisa dib u helay, kadib ku dhawaad saddex sano oo uu u afduubnaa maleeshiyo Soomaali ah.
Maleeshiyada ayaa bishii koowaad ee sannadkii 2012-kii suxufiga ka afduubatay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Wargeys kasoo baxa dalka Jarmalka oo lagu magacaabo Der Spiegel oo uu si madax bannaan ugu shaqeynayay suxufiga ayaa qoray in Micheal Scott maanta laga duuliyey garoonka diyaaadaha magaalada Gaalkacyo, loona qaaday magaalada Muqdisho.
“Wariyihii shisheeyaha ahaa ee afduubka loo haystay waa la sii daayay,” ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha Galmudug oo warbaahinta la hadlay, isgaoo ka gaabsaday inuu ka hadlo in madaxfurasho laga dhiibay iyo in kale.
Xukuumadaha Mareykanka iyo Jarmalka ayaa xusay inay ku daaleen wadahadalkii ay kula jireen kooxaha burcadbadeedda ahaa ee wariyaha haystay si ay uga sii daayaan, laakiin ma sheegin in madaxfurasho la dhiibay iyo in kale.
“Rajadeennii ma noqon mid lunta, haddana waxaan isku diyaarinaynaa inaan dabaal-dagga la wadaagno Micheal iyo hooyadii Marlies, riyooyinkeenniina ugu dambeyn guul guul ayay ku dhammaadeen,” sidaa waxaa yiri tifaftiraha guud ee shabakadda Spiegel Online oo lagu magacaabo, Wolfgang Buechner.
Wariyahan ajnabiga ah ayaa markii hore lagu haystay deegaanno ka tirsan gobolka Mudug, iyadoo burcdddii haystay ay horay u dalbadeen madax-furasho lacageed oo gaaraysa 20-milyan oo doollarka Mareykaka ah .
Lama sheegin in lacag madax furasho ah ay qaateen maleeshiyada uu suxufigu u afduubnaa. Micheal Scott Moore oo ah suxufi, qoraa ah oo 45 sano jir ah ayaa la sheegay in xaaladdiisa caafimaad ay wanaagsan tahay.
Wafdi ka qeybgelaya shir oo maanta gaaray Garbahaarrey
Maxkamadaha darajada 1-aad iyo sare ciidamada oo loo dhiibay madax cusub